Ngama-akhawunti amaninzi, i-tennis yayidlalwa ngokutsha ngabantu baseFransi kwiminyaka ye-11 okanye ye-12, kwaye "iiplanga" zokuqala zenziwa yinyama yabantu!
Hayi, oku akuzange kube yinto embi. Kwakufana nebhola yesandla, edlalwa kuqala ngokubetha eludongeni, kamva emva kwenetha elingenanto. Ngelixa lingahambi kakubi, ukushaya ibhola ngesandla somntu kubonakala kungenakuncipha emva kwexesha, ngoko abadlali baqala ukusebenzisa iiglavu.
Abanye abadlali baza bazama ukusebenzisa i-webbing phakathi kweminwe yeglavu, ngelixa abanye bathatha isetyenti esinyanisiweyo somthi.
Ngeli-14 leminyaka, abadlali bebeqalise ukusebenzisa into esinokuyibiza ngokusemthethweni i-racquet, eneemichilo ezenziwe ngamanzi, ziboshwe kwisiqwenga somthi. AmaTaliyane ahlala ebizwa ngokuba yile mveliso. Ngomnyaka we-1500, ii-racquets zazisetyenziswa ngokubanzi. Iingqungquthela zangaphambili zaziphethe umthi omde kunye nentloko encinci, ene-teardrop. Ngentloko eninzi ye-oval, babeya kubonakala ngathi i-squash racquet. Umdlalo ngokwawo wawufana ne-squash, ngokuba wawudlalwa ngaphakathi kwindlu ebhola ibhola. Ngeli xesha, nangona kunjalo, kwakungenjalo, ngokungafani ne-squash, idlala rhoqo emnatha, kungekhona eludongeni.
I-"Modern" i-Racquet yamaPlanga
Ngo-1874, uMnumzana Walter C. Wingfield ubhalise ilungelo lakhe lobunikazi eLondon malunga nezixhobo kunye nemithetho yerhenti yangaphandle yentsimbi eyenziwa ngokutsha njengento yokuqala edlalayo namhlanje.
Ngonyaka, izixhobo zokusebenza zaseWingfield zathengiswa ukuba zisetyenziswe eRashiya, eIndiya, eCanada naseTshayina. Intloko ye-racquet yayikhule ngeli xesha ukuya kubungakanani obubukwe kwii-racquets zamatye ukuya kuma-1970, kodwa ukuma kwakungekho nje i-oval, kunye nentloko ivame ngokubanzi kwaye ihlala iphantsi.
Iingxowa zambona utshintsho oluncinane phakathi kowe-1874 kunye nokuphela kwexesha le-racquet yokhuni ngaphezu kweminyaka eyi-100 kamva. Iidracquets zokhuni zenze ngcono ngethuba leminyaka eyi-100, kunye nokuphuculwa kwitheknoloji yokuqhaqhawula (ukusebenzisa iindawo ezincinci zokhuni ezihlanganiswe ndawonye) kunye nezikhwelo, kodwa zahlala zizinzima (i-oyi-13-14), zineentloko ezincinci (malunga neekhilomitha ezingama-65 zesikwere). Ukuqhathaniswa ne-raququet yangoku, iindawo eziphambili zeenkuni zemihlathi zazizinzima kwaye zingenamandla.
IiNtloko zoMbane zoKhanya
I-racquet eneentloko zentsimbi yayinokuqala ngo-1889, kodwa ayizange ibone ukusetyenziswa jikelele. Ukusetyenziswa kweThuthi njengezinto ezikhethiweyo akuzange kube nomngeni wangempela ukuya ku-1967 xa i-Wilson Sporting Goods ivelise i-racquet ye-metal eyaziwayo, iT2000. Unamandla kwaye ukhanyisa ngaphezu kweengodo, waba ngumthengisi ophezulu, kwaye uJimmy Connors waba ngumsebenzisi ogqwesileyo kakhulu, edlala phezulu kwi-tennis ye-tennis yamadoda amaninzi kuma-1970 esebenzisa isakhelo sesimbi esinexesha elide.
Ngowe-1976, i-Howard iNtloko, ngoko isebenze ne-brand brand, yazisa i-racquet eyayiqala ukufumana udumo olubanzi, iPrince Classic. Ukhula lwe-USA lusekhawuleza ukubonisa ukuba kunjalo, ukuba baqalise i-racquet engaphezu komhlaba ngo-1975. AmaRecquet weeNxweme awazange athathe, kodwa iNkosi yaseClass kunye nomzala wakhe obiza kakhulu, iPrince Pro, babengabathengisi abaphezulu.
Zomibini zinezixhobo ze-aluminium kunye nomtya womtya ongaphezu kwama-50 ekhulwini ngaphezu kwe-standard square 65 inch square.
Isisindo sokukhanya, indawo enkulu enandi, kwaye amandla amakhulu okwandiswa kwezi racquet ezithe xaxa zenza ukuba i-tennis ilula kakhulu kubadlali abangazange baphumelele, kodwa kubadlali abanamandla, abaphambili, umxube wokuguquguquka kwamandla kunye namandla kwiifom ezibangele ukungaqiniseki apho ibhola iya kugqiba. Izibhengezo ezinzima, eziphambili ziza kuphazamisa okwesikhashana uhlaka lwama-aluminium, ukutshintsha indlela esasijongene ngayo nomtya wechungechunge, kwaye umbhede wechungechunge okhulayo wawuza kuthumela ibhola ngokukhawuleza kwinqanaba elingafunekiyo.
IGraphite kunye neComposites
Abadlali abaphambili bafuna i-frustrated material, kunye neyona nto ibonakala ibe ngumxube we-carbon fibers kunye ne-plastic resin ukuze zibophe ndawonye.
Le nto iphathekayo ithola igama elithi "igraphite," nangona ayilona i- graphite eyiyo njengokuba ungayifumana ipencil okanye i-lock lubricant. Indawo ephawulekayo yokukhawuleza ngokukhawuleza yaba yindawo yokwakha i-graphite. Ngowe-1980, ii-racquets zinokuhlulwa kakhulu kwiiklasi ezimbini: ii-racquets ezingabizi ezenziwe nge- aluminium kunye nezindleko ezenziwe nge-graphite okanye i-composite. Umthi awusayi kunika nantoni na into yokuba enye into ayinakukubonelela kangcono - ngaphandle kwexabiso le-antique kunye ne-collectible value.
Iipropati ezibini eziphambili zezinto zokurhweba zizinto ezinzima kunye nobukhulu obunzima. I-graphite ihlala yinto eqhelekileyo yokukhethwa kwee-racquets ezinzima, kunye ne teknoloji yokongeza ubunzima ngaphandle kokongeza isisindo kuyaqhubeka ukuphucula. Mhlawumbi ininzi edumileyo yama-gracite racquets yayiyi-Dunlop Max 200G, esetyenziswe nguJohn McEnroe noSteffi Graf. Ubunzima bawo ngo-1980 beyi-12.5 yeeunces. Kule minyaka, iinqwelo zokulinganisa i-racquet ziye zinciphisa ukuya kuma-10,5 i-ounces, kunye nezinye iiprocquets njengezi-ounces ezi-7. Izinto ezintsha ezifana neekeramics, fiberglass , boron , titanium , Kevlar, kunye neTwaron zihlala zivivinywa , phantse zihlala zidibanisa negraphite.
Ngowe-1987, uWilson wenyuka ngengcamango yokwandisa ubunzima be-racquet ngaphandle kokufumana izinto ezinzima. I-Profile ye-Wilson racquet yayinguye "wokuqala umntu." Ekubuyiseleni, kubonakala kungenangqondo ukuba akukho mntu ucinga ngcamango kungekudala ukwandisa ubukhulu befomathi ecaleni kwindlela ekufuneka imelane ngayo nempembelelo yebhola. Iprofayili yayiyi-monster ye-racquet, enekhempule 39 mm ububanzi phakathi kwentloko yayo, ephindwe kabini ububanzi befom yeklasi yangaphambili.
Ngomnyaka wee-1990, ububanzi obunzulu obunzima bebukho bukhulu, kodwa ububanzi bezinto ezintsha buhamba phambili: amaninzi amafowulda athengiswa namhlanje aphezulu kunomgangatho wokuqala wangaphambili.
Abenzi bokuhlaselwa baye bafumana impumelelo ngokwabo. Ngokungafani namarcquets enkuni, awaphihliweyo, aqhekekileyo, kwaye adibene kunye nobudala, ama-racquets angadlulela iminyaka emininzi ngaphandle kokulahlekelwa kwintsebenzo. I-gracite ye-gracite eneminyaka eli-10 ubudala inokuba yinto enhle kwaye ihlala ihlala ihlala njalo kangangokuba umnikazi wayo akanalo isishukumisela esincinci sokuyibuyisela. Ikhampani ze-racquet ziye zadibana nale ngxaki ngomlambo wezinto ezintsha, ezinye zazo, ezifana nentloko ephezulu, isakhelo esibanzi, kunye nesisindo sokukhanya kubonakala kuzo zonke ii-racquet ezenziwe namhlanje. Olunye uveliso luye lwaba ngaphantsi kwendalo yonke, njengobhalansi obunzima obunzima kakhulu njengoko kuboniswe kwii-racquets zeWilson Hammer, kunye nobude obude, okokuqala kwaziswa yi-Dunlop.
Yintoni elandelayo? Kuthiwani nge-racquet ye-elektroniki? Intloko iphume nge-racquet esebenzisa iteknoloji ye-piezoelectric. Izixhobo ze-Piezoelectric ziguqula ukuzwakalisa okanye ukunyuka ukuya kumbane ugesi. I-racquet entsha yeNtloko ithatha ukuguqulwa okubangelwa yimpembelelo kwibhola kwaye iyiguqulela kumbane kagesi, owenza ukuba udambise. Ibhodi yesiphaluka kwidibanti ye-racquet ize ikhulise amandla ombane kwaye ibuyisele kumakhamera e-piezoelectric ceramic kwisiqwenga, ebangela ukuba ezo zinto zizinze.
Iimonki eziqhelekileyo zaseFransi ziya kuchukumiseka.
Zonke ngeeKalk Bags
Uluhlu lweeLebboards eziPhambili eziye zaveliswa
Indlela yokuLawula iiKlabhu zeGalofu
I-Cleveland Mashie I-Irons I-Combo Hlaziya ukuHlola
I-Mizuno MX-17 Iirons: Iimpawu zazo kunye nezinto abazithengisayo
Ikhonkco Yakho Yesiqhelo Sokukhangela Impahla
U-Ping Uvakalisa iNgcaciso entsha yeeKlabhu, i-G5 Series
Ubungqina Bobunxele NgeBongo Yobulungisa
I-Anakin Skywalker (iDarth Vader)
Ngaba Ndiyakususa i-My Graduate Record Exam (GRE) Score?
'Iingu-80 zeeNgoma ezivela kwi-Revamped Lineup of Classic Rock Band Ewe
Iingoma eziphezulu zeKrismesi Iingoma
Indlela yokuphendula kwiNgcalulo ngexesha loPhando lwaBasebenzi
Abameli beeKholeji zeMarist
Umthetho owodwa Isicwangciso sesishwankathelo sika-Arthur Miller esithi "Bonke oonyana bam"
Iikomiti zeNkomfa zeCongress
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe yaseBerlin
UJohannes Gutenberg kunye neNcwadi yakhe yokuPrinta
Imigaqo yokuSungulwa kweMigangatho ye-Inorganic
I-Chemistry yeMimoya: Ukunyanzelisa nokunyuka kwamanzi
IYunivesithi ye-Findlay Admissions